ढुंगेलले प्रचण्डलाई सोधे म ज्यानमारा नै हो ? हो भने तपाई चाहीँ के हो ? महाहत्यारा ?::Pathivara News
ढुंगेलले प्रचण्डलाई सोधे म ज्यानमारा नै हो ? हो भने तपाई चाहीँ के हो ? महाहत्यारा ?
नयाँ शक्ति नेपालका नेता गणेश श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुकमा मार्फत ढुंगेलको भनाइ उद्धृद गर्दै उक्त कुराको जानकारी दिएका हुन् । ढंगेलसँगै अनिल शाह पनि जनयुद्धकालिन मुद्दामा जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।
ढुंगलको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिदैँ गएको पनि नेता श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुक स्ट्याट्समा उल्लेख गरेका छन् । तर २३ औँ जनयुद्ध दिवसको अवसरमा माओवादी नेताहरुले अलगअलग शुभकामना दिँदै जनयुद्धको बाँकी कार्यभार पूरा गरेरै छाड्ने दाबी गरेका छन् । आमूल परिवर्तनका लागि २०५२ फागुन १ गते नेकपा माओवादी जनयुद्धमा होमिएको थियो ।
१० वर्ष चलेको युद्धमा राज्य र विद्रही दुबै पक्षबाट १३ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने हजारौँ घाइते र अंगभंग भए । त्यस्तै, हजारौँ संख्यामा नागरिक बेपत्ता भए । माओवादी पूर्व लडाकूहरु नेपाली सेनामा समायोजन भई राष्ट्रिय सेनाको अंग पनि बनिसकेका छन् । तर, विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको वषौँ बितिसक्दा पनि नेताहरुले विगता बाचाहरु पूरा गर्न नसक्दा पार्टी कार्यकर्ताहरु निराश छन् ।-